UEFA Oo Xayiraad Ku Soo Rogtay Qayb Ka Mid Ah Garoona Bayern Ee Aliaz Arena
Kooxda Bayern Munich ayaa lagu riday xukun ah inay xidho oo xayirnaado qayb ahaan garoonka Aliez Arena, Is araga labaad ee Kulanka horyaalka Champion ka ee ay qaabilayso kooxda Manchester United, kadib boodh qoraal xun xambaarsan oo taageerayaashoodu soo bandhigeen.
Boodhka oo lagu soo xardhay erayo ka turjumaya aflagaado ku socota kooxda Arsenal ayaa sidoo kale xambaarsanaa sawir lagu aflagaadaynayo xidiga khadka dhexe ee Mesut Ozil.
Ka sokow ganaaxa ficilka ah , waxa kale oo lagu xukumay kooxda Germalka ah inay bixiso €10,000 ( toban kun oo lacagta Yurub ah), kadib markii lagu hellay dhacdadaas taageerayaashoodu muujiyeen kulankii Champions League ee ay gurigooda ku marti galliyeen kooxda Arsenal bishii March 11 keedii.
“Waaxda ilaalinta iyo Anshaxmarinta Uefa , waxay go’aamiyeen amarka xayiraad ah ee qayb ahaan garoonka kooxda Germalka ah ee Aliez Arena,” ayaa lagu yidhi warsaxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay xidhiidhka kubada cagta Yurub.
“Khaas ahaan, waxa la xayiray qaybta 124 ee garoonka , ciyaarta Bayern Champions leugeu rubuc dhamaadkiisa la ciyaarayso Manchester United FC ee 9 April. “Iyo ganaax lacageed oo kooxda Garmalka ahi bixinayso €10,000 kaas ooy ku mutaysanayaan qoraalkii foosha xumaa ee taageerayaashoodu boodhka ku soo dhigeen.”
Markii Qoraalka ganaaxanyadani ka soo baxeen Uefa, naadiga Bayern , waxay soo saareen hadal ay ku aqbalayaan go’aanka xidhidhka Yurub.
“Falka kulankii Arsenal, waxaan uga xunahay si aad u xun , waxaanan si xoog ah uga soo horjeednaa boodhkan jinsi nacaybka xambaarsanaa,” ayuu gudoomiyaha naadiga Bayern, Mr Karl-Heinz Rummenigge ku yidhi qoraal uu soo saaray.
“Bayern Munich waligeed taageeri mayso falalka noocan ah. sidoo kalena waa inaanu aqbalnaa ciqaabta Uefa na saartay.
Waanu baadhi doonaa cidkastoo lagu hello inuu ka dambeeyey falkan, waxaanan marka la helo kadib la tiigsan doonaa sharciga si haddii ay suurto gasho dadkaas looga qaado magdhow.”
Zidane Oo Qaatay Liisanka Tababaraha ee UEFA
Lampard Oo Wacad Ku Maray In Aanu Ku Dabaal dagi Doonin Chelsea
Uefa Oo Go’aansatay Inaan La Sii Dheereynin Ganaaxii Mamadou Sakho
Hellas Verona Milan 3-0 – Extended Highlights & Goals
Rooney Oo Is Difaacay
Khedira : “Waan u xiisi doonaa Real Madrid”